MUUQAAL: Xukuumadda Somalia oo Kenya dul dhigtay Go’aan la Xidhiidha Duqaynta ay fuliso | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Xukuumadda Somalia oo Kenya dul dhigtay Go’aan la Xidhiidha Duqaynta ay fuliso
Muqdisho ( Kalshaale ) Xukuumadda Soomaaliya Â ayaa si adag uga hadashay duqeymaha cirka ah ee ciidamada Kenya ka fuliyaan qeybo kamid ah dalka oo maanta la mamnuucay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbeayaa markale ku celiyay in dowladda ay cambaareyneyso duqeymaha joogtada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Kenya ee lagu dilo laguna dhaawaco dadka rayidka ah ee ku nool Soomaaliya.
Dubbe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay marnaba u dulqaadan doonin khasaaraha bulshada rayidka ah kasoo gaaraya duqeymaha Kenya, isagoona shaaciyey in dowladda ay mamnuucday in duqeymahaas dowladda Kenay ay fuliso amar laâ€™aan.
â€œDowladda Kenya maanta laga bilaabo ciidamada cirka ee Kenya duqeyn kasta oo ay geysanayaan waa inay kusoo wargeliyaan Taliska guud ee AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyaga oo aan kusoo wargelin ma fulin karaan wax duqeymo ah, kumana soo xad-gudbi karaan xuduuda,â€� ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Goâ€™aanka dowladda Soomaaliya ay ku mamnuucayso duulimaadyada Kenya ayaa kusoo aadaya, toddobaad kadib markii ay dowladda si adag u cambaareysay duqeymaha Kenya ee Soomaaliya, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay khasaaro u geystay dad rayid ah.
Kenya ayaa 3-dii Juun 2021 weerar cirka oo aan loo aabbo yeelin ka fulisay deegaanada Ceel Cadde iyo Hisa-u-gur oo ka tirsan gobolka Gedo, Jubaland State, islamarkaana sababay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur, kuwaasi oo banaanka u soo saaray astaan â€‹â€‹aan fiicnayn oo ah hannaanka hawlgalka ee ciidamada cirka ee Kenya.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=44821
20 Comments for “MUUQAAL: Xukuumadda Somalia oo Kenya dul dhigtay Go’aan la Xidhiidha Duqaynta ay fuliso”
Nacalaa ku yaal Usc iyo wasskhdii wadankii dhiisnaa diirtay.
Yaa odhankara ama aaminkara Somamaliya ayaa lahayd ciidan cir,dhul iyo Marine kkkk
.Diyaarad dagaal iyo kklkk isgaadhdiin
Ilaa ay wadankii ka dhigeeen meel habar waliba soo gasho,dadka layso,kufsato oo waxa ay doonto ku samsyso
Ilaa maanta wuxuu socdaa bahdilka Ummadda Somaliyeed.
Yaayakhsi wadan uu dadkiisii sudaa u diirtay.
Xataa Ajaanib ku qadsaday sidaa wax uma dirteen.
Yaabka yaab kii.
Meel hoo u baan hadal waxba kama taro! Cambaarayn iyo goodin ma loo baahna ficil adag oo Kenya lagu xanuujiyo ayaa loo baahan Yahay!! Waana in diyaarahooda qabta ah lasoo daadiyo oo pilots wada la laayo iyo in ciidanka ceel waaq iyo
Jubooyinka jooga ee xadgubka kusoo galay loogu aaro dadka somaliyeed! Waliba Waa in magdhow Ka bixiso dadka somaliyeed ee ay fulayada Kenya xasuuqday! Hadii heshiisyo lala galayo conditional looga dhigo inay magdhow bixiso inay fully u muujiso darisnimo wanaag oo ayna mardanbe kusoo xadgudbin wadankena hooyo! Kenya Waa fulayo Hadii la xanuujiyo edeb ayay yeelan! Waana in ciidankeeda inay wax dilaan wax barakiciyaan dumarka kufsi kula kacaan iyo xaalufinta dhirta iyo daaqa ayagana si deg deg ah loo saaro xoog wadan aadan lahayn oo aad dhib dadkiisa ku hayso kuma joogi kartid!! Waxa ayaduna muhiim tuugada la safan Kenya sida ccc shakuur! Hasan Shiikh iyo dhuxulow iyo dani Iyo mucaarad isku sheegyada Mogadishu dowlada dhexe ee somaliyeed ku ah lafta dhuunta gashay Waa in ayagana lagu soo roggo xukuno ad adag oo ay ku mutaystaan ciqaab adag! Waliba in doorashada dhici doonta in lagu sameeyo baaritaan adag oo loo diido inay ka qayb galaan baarlamaanka Somalia ðŸ‡¸ðŸ‡´ in hindise sharciyeed la hor geeyo oo qofkii khiyaano qaran galay amase la safan loogu diido inuu ka qayb galo doorashada ileen Waa Qof masuuliyad lagu aamini karin! Oo ah danbiile!! Dowladu seefta galka ha kala baxdo!! Kenya iyo emerate iyo dabadhilifka Waa in lagu shito!!
June 10, 2021 - 9:53 pm
Soo tii Adeerkay Duuliye Sare Axmed
lagu dhahey DIYAARADIHII loogu talo galey
iney Shacabka Hargeysa ka difaacan
Orod oo ayagu ku soo rushee waliba
Caruurta iyo waayeelka Isaaq ii howdka u qaxay
Kadibna uu dhahey QARANKU WAA QABIILOOBEY
DIYAARADA iyo Ciidankuna waa QIIMO BEELAY
kadibna uu geeyay DALKII LABAAD EE SOOMAALIYA
Yaa Ciidanka qiimo tiray
Yaa Qarankii Midoobay kala diray
Yaa shacabkii is dhalay kala qixiyay
Ma jecli inaan kaala doodo METH QABIIL
lkn sida xaqiiqdaa IN FARMAAJO si Democracy
ah loogu doorto Xamar waxaa sababay
Beelaha yar yar waxaa u roon
Dowlad SHUUCI ah oo qabiilada waaweyn
Uga soo aruuriso Canshuurta
Ayaguna ( Minority) u XADREEYAAN DICTATOR
I understand that but will never happen again
June 10, 2021 - 10:06 pm
Tuke soo maahan CIIDANKA SHARAFTA LAHAA
ee usu bedalay inuu WIILASHA SCHOOLS
Nolosha ku aaso
JUUNI oo ahaa SARGAAL SARE soo maaheyn
Wiilashii Isaaq ninkii ku aasay Xeebta Jazeera
Waxaa ku jiray Wiil ka shaqeyn jiray
Charge Jirde Xusseen ee iibinjiray
Cagafyada FORD, waan aqaanay oo mararbadan
Ayuu noo sameeyey CAGAD aan ka iibsanay
Muxuu galabsadey ( ONLY MAGACA ISAAQ)
Waxaas malagu tilmaamikaraa CIIDAN QARAN
June 10, 2021 - 10:52 pm
Kenya iyo imaaraatka dantaa urunsheegtay . imaaraatka shalay ayuu isdhiibay sacuudiga doraad maantana Kenya nabad iyo nolol intaan kutaageero waa intaas canaasiirta oo dhan ayay iska dhasheen
Qofka biniiaadamka ah inuu isku kalsoonaado ilaahayna wakiisho cid ka guulaysan kartaa majirto
June 10, 2021 - 10:55 pm
Wallaahi waa mucjiso asn la qiyaasi karin.
Waar waaa yasb e diyaaradihii,noic walba lahaa iyo Maraskiibtii kkkk
Ileen ciil badanaa.
Yaa rumaysankara in Somaliya aduunka ka mid shayd.
Qofna taasi ma aaminkaro.
Marmardiiyo iyo nacadnimo noqonmayso Isaaqbaa ka duqeeyay oo dambi ayaa la galay.
Snm dambiile qaranbay ahayd in la garaaco xaq ayay shayd.
Wadana ma ogollaado in Jabhado Mooryaan ah loo soo adeegsado.
Waaa badbaado qaran.
Daawo waxa ku dhacaya Tplf.
Ama ku dhacay Frud jabhadii Canfarta. Difaasc wadan ayaa la yidhaa.
Cadow qabsada Somaliya aa dhaami lahaa waxa ay samaysay Usc.
Wallaahi magaca Ilaahay ayaan ku dhaartee Amxaar ama Cadow kale oo qabsadaa ma sameeyeen waxa ay Usc samaysay.
Waliba Somali iyo walaal ila sheegaynaysaa.
Qashinka Muwdisho ka biqleeyaana rajo ma laha.
Anigu buug ka qorayaa wixii dhacay 91 to Firmaajos Reign – A to Z.
Hadii Eebe yidhaa
June 10, 2021 - 11:09 pm
War bal nasladan iyo casladan eega! Wuxuu ku leeyahay duqayntii Gedo ayaa lagu qarinayaa oohinta hooyooyinka ilmahoodii ka maqan yihiin.Bal caqli daanyeernimadaas eega.Maxaa iska quseeya ilmaha maqan iyo duqayntii Kenya?
Ebbahay ballankii kani kal xishoota ama sariigata malaha.
Ileen dhuuni raacaa
Dhadhamada ka doorbida
Run inuu dhagaystoo
Dhago iibsan waligood
Waxba kuma dhibcaanoo
Xaqiiqada ma dhuuxaan!!
Ileen dhaqan habboon iyo
Qofkii diin ku dhaataa
Ka dhawrsada xumahee
Hadduu shilimo dhaafsado
Afka ceebta dhaansaday
Dhigay uurka boolida
Caku show ma dhihi karo
War aniga ha i dhuux togin
Dhib-baa noo horseedee!!
Suldaanka waxa u kala soocan qaran iyo maamul. Marka for sake of argument qudha qoraalkan mana aha mid aan maamul dowladda Siyaad Barre ku taageersanahy
Imaamka Qabyalaada iyo taariikhda beenta,
Waan kugu ogaa damiinnimada qarannimada kaa haysata imminka waxaad sii laba laabtay buunbuuninta iyo marin habaabinta taariikhda aynu wada joognay.
Ragga iidoor looga dilay Hargaysa ma haysaa tiradooda?
Ma haysid inta jeer ee la duqeeyay xeryihii mooryaantii SNM?
Sababta loo duqeeyay ma caddayn ama sheeki kartaa?
Waxay Iidoorku kuu sheegeen baad la niic leedahay.
Ma sheegi karta boqolaalka kun ee Iidoorku ku xasuuqeen xeryihii qaxootiga
Ka warran SSDF tii lagu xasuuqay Mudug iwm
Ka Warran SPM lagu xasuuqay Kismaayo iyo Afmadow dhexdooda ama Kismaayo ilaa Diif ma Kolbiyow.
Ma nacayb qabiil buu ahaa xasuuqooda mase waxa la jarayay daanyeernimadii ayagoo afar xabba ah ku warareen qaran dhisan oo cidda hadashaba raamsanayay.
Xidhiidhka ka dhaxeeyey Afwayne iyo Dhabayaco ama Cagdheer ma nacayb buu ahaa mase milgaha qarannimo ayaa laysku haystay.
Iidoorku nac looguma duqayn dowladnimada ayaa ah in ciddii waddanaka ku soo duusha in shaarubaha dhulka loogu dhufto.
Haddaad Xaafaaddaan London ka deggan tahay koox maafiya oo diidan habartan gowza xiinta Queenta ah la wareegaan, ma wardi bay u akhrinayaan bay kula tahay ciidanka Ingiriiska. Sida oo kale Mareykanka Gitmo Gulag dhistay………Mase xasuuqadooda waa la jiifiya
Ayaan darrada ku haysata waxaa weeye adiga iyo doublkaada Mahad Salaad inaydan taariikhda, dowladnimada iyo qarannimada midna waxba laydanka barin oo aad tihiin damanayaan ku indha beelay qabyaalad qudha.
Golahan inta rag uu Suldaanka ku jiro joogaan weligaa ha ku riyoon marin habaabin siyaasadeed iyo taariikheed inaad samayso.
June 10, 2021 - 11:41 pm
Diyaaradihii yaad ka iibiseen?
Mise iga qudhooda waa la furfuratay?
Bal war iga sii kkk
June 10, 2021 - 11:48 pm
dawlad waxaad u taqaan macnaheeda ayaan kuu arkaa inaad khalad ka fahansan tahay.
dawlad marka hore magaca guud waa hal maamul oo leh dad iyo dhul ay maamulaan ka dibna sameeyaan adeeg yadii shacabkaa loogu adeegi lahaa qaabkay ku timaadaa hadaba noocyo badan sida mid shacab doortay iyo mid jujuub lagu qabsaday
waxaad magac dawladnimo ku difaacaysay gaalkii siyaad bare inuu saxsanaa markuu majeerteen iyo isaaq xasuuqayey
diinteena suuban ayaa inoo sheegaysa qofka diida ama badala kitaabka alle inuu gaal yahay,waxba yaanan sii dheerayn adiga sheekadaa hadii mid ficoonoo kale ahi somaliya qabsado oo mideeyo waad ogoshahay sababtoo ah waxaad rabtaa wax xabashiga kaa furfura,
riwaayada inaga daa iyo qabyaalad ma aqaan magacan aad ku khafiiftay ee idoor hadaadan joojin karin isku day bal inaad yaraysid,
imaam dabshidna qoraalkii maag laakiin no jokes bellow the bell ileen waa adigaan is caleema saaraye
June 10, 2021 - 11:51 pm
Anigu ma sheegin NIN JABHAD AH
Oo qori wato
Ee waxaan sheegay SHACABKII guryaha
ugu daateen RAGGII AY TARAX QAXOOTI iyo
GABYOW ka soo aruuriyeen JIGJIGA
iyo ilko yartii uu DHAGO-BACEYR SOO ARUURSADAY
Iyo DAAROOD YAR YARKII UU MOORGAN SOO ARUURSADAY
War ma waxaad ileedahay
INUU DUULIYE AXMED diido xasuuqii
Shacabkii Hargeysa waxay aheyd QARAN JAB
War ma waxaad ileedahay in shacabka
La xasuuqo waa DOWLAD WANAAG
Xoogaas iyo nacaybkaas waxaa kaaga baahan
Revaluation kasto wuxuu leeyahay
Shakina kuma jiro iney USC IYO SNM
Ugeysteen tacadiyo badan shacab Soomaaliyeed
Kuwaas oo intooda ugu badan ugeysteen
Qabiiladii ay ka dhasheen
June 11, 2021 - 12:08 am
Diyaaraduhu waxay ahaayeen
DAMBIILEYAAL marka waala aasay
Indha shacabka ayaa laga qariyay
si aanay u xasuusan dhibkay geysteen
CALANKII AYAANA qalqiil ugu jiro
In MAXKAMAD LA SOO TAAGO
waaba Diyaaradihii loo dhiibay
ADOONTII SOUTH AFRICA
Markay diideen Hawiyahii
DAAROOD waalaga waayey
Hal Pilot iyo waliba hal nin
oo yaqanay nuucyada hunka
18% ayay awalba ka ahaayeen
Somaliya, 18% kiina waxay wada xirteen
– General aan AK47 ridi aqoon iga dheh
June 11, 2021 - 12:40 am
War aan idin kala qabto kolay caqligiina ma faro badnee.
1-Absulately in AU MSBARE uu ahaa dictator xasuuq gaystay cid difaacaysaa ma jirto kala saara.
Shacab nooc kastaa leh aan hubaysnayn in la duqeeyo sax ma ahan.Tuug qori wataa oo SNM.SSDF la baxay wey banaan tahay in dalka laga qabto,dawaladdii si fiican uma maarayn arrintaa tusaale shacabka in lasiiyo wadooyin ay ku baxaan la sugo inta burcaddu ka dhex baxayso shacabka loo diyaariyo shacabka agabka ay u baahan yihiin etc taa ma dhicin xasuuq qurmuun,qabyaaladeed ayuu ahaa.
2-Tuug tii SNM maxay wanaag ah oo ay sameeyeen 1 positive yaa xusi kara?Ma jirto mujrinnimo ka weyn shacab in ceelal lagu guro iyagoo nool,ayaa ii sheegi kara?Thousands qaxooti iyo civil servant ah ayay laayeen iyagu yaa baneeyay dhiigooda?
3-1982 3kun burcad SSDF+5kun ciidanka Ethiopia ayaa layn kasoo bilaabay 400Km gudaha Ethiopia iyagoo laynaya Shacab aan hubaysnayn siyaasad aan shaqo ku lahayn illaa ay Balanbale qabsadeen masaajidka kaliyana ay tageen.
Khisooyinkii ugu xumaa waxaa ka mid ahaa wiil ayaydii soo korsatay ayaydana looga qaxay Balanbale ayaa u sheegtay in ay gabadheedu dhashay wiilal reer hebel ah,ka dib waxaa loo sheegay wiilkii gabadheedu dhashay ee iyadu soo korsatay balse ka tagay SSDF ku biiray.Ayaydii wuu diiday in uu soo kaxaysto meeshiina ay ku dhimatay.
Yaa qabaail ka nasahan nadiif ka ah oo 1 positive oo burcaddaas ay samaysa noo sheegi kara?
Yes MSBARE was ruthless dictator,qoys kastaa oo dhib uu kasoo gaarayna waan la qaybsanayaa taageerayaa in cadaalad la marsiiyo.Adinku ma waxaad leedihiin addeeradiin waa mujaahidiin?Ma dhacayso in daalim in mid qabaail lagu difaaco midna la caayo caqli ma ahan.
Jabhadaha waxa aad u taqaanaan jabhad ma ahayne jabhad waxaa ahaa TPLF ama ELF etc.
Aniga qoyskayga qaraabo dhow ah ayaa hadda la helay iyagoo xabsi laga soo daayay CEELGAAB iyo Laasocaano waan un maqlay ayaa loogu yimid 7 saacadood taangiyo la dulmarsiiyay boqolaal caruur,waayeel leh ku dhamaaday.Yes dadkii Mudug dawaladdu ku laysay qalad bay ahayd kuwaan ma saxbaa?Dawalad naga wada dhaxayso ayaa samaysay,balse SSDF Somalinimo,islaamnimo ankee Daaroodnimo ma xeerin.Abtiyaashood tuulo EELAAY 180 nin 1 subax wada Shacab ah ku laayay ogow Habargidr ayaa la sheeganaayay si xadka looga soo gudbo.
CAQLIGEENU WAA FOORARAA.NIN AAN WANAAG SAMAYN AYAA ISKA QAYLINAAYA
June 11, 2021 - 1:04 am
saaxiib waadka dhacsantee anagu snm usc ssdf kamaanaan hadlayn manaanaan odhan wax xun may samayn mana soo hadal qaadno laaakiin ogoontii kacaanku iyaga dooda xhks keena una macneeya inay dawladii siyaad bare dawlad ugu danbaysay
anigu waxaan odhan lahaa qolooyinkiina somaliya cid walba oo maareeye shaqo ka saraysa soo doononaya waa in la marsiiyaa
highest government security clearance;
Ta ugu haraysaa ay noqoto qofka aaminsan dawladii kacaanka in la ridaa inay khalad ahayd oo shaqadaa aan la siin.
bal yara dhuuxa macnaha ku jira macno qabiilna maaha bacause somali reer walba leh ayaa aaminsan waana waxa ay dawlada xamar la dhaqaaqi la’dahay 30 years
Horta naga daa erayga Revolution.
Eraygaasi shaqo kuma laha dad qabiilo ah oo wada yaala..Revolution wuxu wataa Idealogie shacab
Usc ma laha waji fiicaan haba yaraatee.
Wadankoodii soo galeen,bililiqo A to Z.
Deedna la gaadhay meel aan waxba laga qabankarin.
Waa Taariikh ugub ku ah aduunka waxa Somaliya ka dhacay ee ilaa haatan ka socdo.
Waxa dhacay oo kaa dhamaaday,waa roon yahay.
Siasd Bare Era,kowsatsy 1969 oo dhamaatay,1991.
Laakiin dhibka Usc wuxuu bilooday 1991,ilaa hastanna wuu socda.Wali dhibkaasi meelna looma dhaafin
Wax dhamaaday,1991 iyo wax bilooday 1991 oo ilaa maanta socda ayay kala yihiin.
June 11, 2021 - 3:55 am
Wasiir Dube dawlada N&N inuu la kawsado ayay ku haboonayd, intii yarayd ee uu jooggay ee dawladan R/wasaare Roble, waxa ka muuqata inay waajibkoodii u wada gudanayaan sidii shacabku rabey. War saxaafadeedkiisaas qurbo joog iyo qolqoljoog/qaran isku si buu qalbiyadooda ugu qada daabacnaa, waxaadna moodaa inay Somalidii talaabadii isla heshay, siyaada Allaah.
Webkan Kalshaale oo ah Mareegtii ugu hufnayd ee wararkii dalka loo soo doonan jirey, akhbaarta lagu soo daabacona qofkasta aragtidiisa wax uun ka odhan/dhihi jirey. Somalida dhac ku noolka ahayd, tuugadana u badnayd ee u beer cadaaday dhaca ummadda, yacnii kefad/miisaan dheeli doon, mucaarad iska yeelyeel u bartay madaafiic rasaastoodu Udo nijaasa tahay inay ku soo tuuraan dadka ummadda ugu khidmaynaya sidii ugu hufnayd ee la rabey !!! Fadlan, seminar aada aad ku baranaysaan ethics-ka iyo wadaniyada, danta guud iyo ta garaa, yaa sokeeye ah yaase shisheeye ah… ( Reer talaabo xumow toosiya luquntiina: Xaange, LOP, Dabshid, Caddaado, Wiilxeraale, hobyogodan, curaafiiste iyo Mr. daanyeereeye).
Mareegtii, waxay ka dhigteen geedkii doqon ma waaye, ee ay isugu iman jireen inta la soo khaldo ama lagu shaqaysto oo sida shimbirta baqbaqaa-ga (wixii loo soo dhiibo ku hadaaqa oo ka daba dhaha)!!!.
Ma dood baa ka taagan in Kenya Somaliya ku soo xad gudubtay, oo waxay laynayso ay Somali yihiin? Mase dood baa ka taagan in ciidankii ahaa hantida qaranka ee dawlad kasta oo timaada u ahaa daljire difaacaya; siyaasiyiinta ka sinaysta siyaasada ee dawladaha kale u ah dhoobiga loo soo adeegsado ama loo soo dhiibo qiimo rida ciidankiina oo maleeshiyo beeleed ka dhiga “OK” u kala qaybiya qabyaalad ciidanka “OK” dagaal sokeeye ka rida caasimada oo guba “OK”
June 11, 2021 - 5:48 am
Qofka Soomaaliga ah ee u dagaallamaya inuu isagu Soomaaliya xukumo gartay oo waa han sare…
Kan u fagaallamaya in xaq ka maqanyahay oo wixiisii daba jooga isna gartay…
Kan wax boobay oo is leh yaan lagaaga daba imanna gartay…
-Waxaanse garan waayay kuwa aan u bixiyay Qareennada Cadaw kasta oo Soomaaliyeed… Kuwaasi waxa ay taageero hiil iyo hooba la garab joogaan cid kasta oo ay Soomaali is qabtaan…
Hadda waxay garab iyo Gaashaanba u yihiin, Uhuru, Tplf, Uae iyo Habaab…
Bal eega waxa Dubbe lagu haysto hadda oo rag waawayn oo meeshan ka doodaya ku afjigayaan… Micnaha kaliya een u fasiran karo raggaa dooddoodu waa un ciddii neceb qarannimada Soomaaliya waa jaalkayo waana la jirnaa…
Adeer dalkan waligii Xuurta laguma hayn karo, waa in aad isbeddelka oggolataan, aqbashaan lana falgashaan… Soomaaliya ma aha tii uu Geeljiruhu majaraha u hayn jiray 30kii sano ee la soo dhaafay…
June 11, 2021 - 1:21 pm
Xasuuqii ka dhacay Somaliland ee uu gaystay Maxamed Siyaad Barre waxa uu Ahaa xasuuqii ugu Bahal sanaa ee abid ka dhaca geeska Africa!
Waxaa la hayaa Dukumintiyo cadayn ah sidii Ummadaa Soomaaliyeed ee aan Waxba galabsan loo xasuuqay. Waxaa la laayey Dumarkii,Caruurtii,Shacab aan hub Wadan Birma gaydadii ayadoo loo isticmaalayo nooc kasta oo hubkii Qaranka ee Loogu talagalay in Cadawga lagula dagaalo xitaa Waxaa loo isticmaalay Diyaaradihii Dagaalka Somali Airforce !
Aduunka lama sheegin Diyaarad ka kacda oo hadana duqaysa isla magaaladii ay Ka kacday waagaa kahor maysan dhicin.
Waxaan idin leeyahay Never againâ€¦.. Haku soo noqonina Somalia Intuu nagu dhexjiro qof sida Ali Zubeer oo kale u fikiraya. Waa iga talo ku fara Adeega Dawladiina Barakaysan ee Somaliland guulaysta aqoonsigiina waa dhaw Yahay.
June 11, 2021 - 1:47 pm
Ali zubeer isagu wuxuu taagan yahay hadii nin firciinoo kale ahi imaaanayo oo uu somali Khasab isugu keenayo wuu taageerayaa.
Qadiyadiisu waa xabashiga yaa kaa furfura waar yaa yidhaahda iska iimaanso islaantii somali la odhan jiray bari horay dhimatay
Waan ku salaamay saaxiib.
Kaahinoow waxaa la yiri rag walaaloow wax u dhaama la waa !
Waa iska sheeko barilay ninka maantay aaminsan in qasab iyo Dictatornimo Iyo Juu Juub ay Soomaaliya maantay ka shaqaynayso. Farmaajo ayuu isku dayey asna Waad aragtaa waxa ka raacay ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
Yaa is gaaray Habiqlaysoâ€¦. â€¦.. Hawiye Action Group qoladii Dictatornimo iyo wax U eg ula timaada naasahaa laga lisi ðŸ¤£ðŸ¤£